WordPress: Yiri Post Tweaking | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-eji WordPress, otu n'ime plugins gị chọrọ kwesịrị ịbụ njikọ Post ngwa mgbakwunye. Nke ahụ kwuru, achọpụtara m na olu nke isiokwu ndị a na-ezigara na Daily Reads m na-akụda nsonaazụ Post metụtara.
Dị ka nke ọma, O juru m anya na ngwa mgbakwunye Related Posts naanị nyere ndepụta nke ihe ndị metụtara ya tupu post nke ị na-agụ! Gini ma oburu na igbanwe obi gi (dika m na eme!)
N'ihi ya, emere m obere obere tweaks na ngwa mgbakwunye ahụ. Nke mbu, iji zoo aka na ntinye tupu ma mgbe ugbua di ugbu a, agbanwere m ahịrị 91 site na:
. "NA post_date> = '$ ugbu a'" ka (Emelitere: 11/15/2011):. "NA post_bọchị! = '$ Ugbu a'". "NA post_bọchị <= CURDATE ()"
Nke abụọ, Daily agụ na m blog na-ezigara na-akpaghị aka site na Del.icio.us n'okpuru otu onye chepụtara (ka m wee ghara ịgbanwe paswọọdụ wee mebie mgbasa ozi akpaaka). Iji mee nke a, agbakwunyere m ntinye ajụjụ ọzọ iji hapụ onye edemede ahụ site na posts ndị achọrọ site na itinye akara na-esonụ mgbe gara aga:
. "NA post_author! = 4"
Achọtara m nọmba onye edemede naanị site n'ile ya anya na ndị ọrụ m. Agaghị m eme ka ihe sie ike site na isonyere na tebụl ọzọ - ọ nwere ike belata ọsọ nke gosipụtara nsonaazụ ndị a wee belata oge ibu. Nke ahụ ga - eme ka ndị mmadụ nwee nkụda mmụọ ma laa.
Uru nke Igosiputa Ihe Njikọ
Ozi ndị metụtara ya bụ ngwá ọrụ dị egwu maka blog ọ bụla. Njikọ posts na-ewusi Nsonaazụ Nchọpụta Nchọpụta site na ịme ka isiokwu ahụ dị ukwuu site na njikọta, ihe dị mkpa nke Search Engine algorithms.
Njikọ posts abụghị naanị a SEM ngwá ọrụ, ọ bụ ezie. Ihe ndị metụtara ya bụ ngwá ọrụ njide ga-eme ka ndị ọrụ na saịtị gị. Ha nwere ike ha agaghị ahụ ihe ha na-achọ ebe ha rutere - mana ọ bụrụ na ịnye ha amaokwu ndị ọzọ, ha nwere ike ịrapara!
Tags: Tụọ CPmyreponoyiri posts
Hannes Johnson kwuru
Jenụwarị 2, 2008 na 9:23 PM
Agụụ dị jụụ. Aghọtaghị m na ihe ndị metụtara posts naanị na - ahọrọ ihe ntinye ntinye blọgụ gara aga… Aga m aga dezie nkwụnye ahụ. Daalụ maka isi na ntuziaka 🙂
Na afọ ọhụrụ obi ụtọ!
Ezigbo mbanye anataghị ikike - ọ bụ ezie na m na - eji Mfe Mfe maka ihe metụtara ederede na - adabere na mkpado, mana m kwenyere kpamkpam na ederede metụtara ya bụ ihe dị mkpa.
Jenụwarị 3, 2008 na 1:05 PM
chei .. nke a bụ aghụghọ dị mma. Agbanyeghi na enweghi m ihe gbasara ihe gbasara wasabi, enwere m ihe ntinye nkpado maka ihe ndi yiri ya ma echere m na o gha eji otu uzo. Daalụ maka ego ahụ, ka m lelee koodu nkwụnye m wee hụ ma m nwere ike ịgbanye ya iji nye nsonaazụ kacha mma.
Jenụwarị 3, 2008 na 7:32 PM
Chandoo, Mfe Dị Mfe anaghị eji ọnọdụ postdate - ekwenyere m na ọ na - emepụta ihe metụtara ya na - ebi ndụ, yana ihu akwụkwọ ọ bụla (belụsọ ma ị gbanyela oghere ahụ). Nke ahụ abụghị ihe kachasị arụ ọrụ maka sava ahụ, mana ọ pụtara na ọ ga-enweta egwuregwu kachasị mma, ma edepụtara ha tupu ma ọ bụ mgbe elelechara post ahụ.
Doug - gbaghara maka ịhapụ isiokwu ntakịrị
Jenụwarị 3, 2008 na 8:02 PM
Enweghị nchekasị, Stephen! Mụnwanyị nwere mmasi m! Ugbu a, m ga-aga lelee Simple Tags!
Akwa post! Mana achoro m icho nati ole na ole.
Eziokwu gị(bụghị) isonyere na tebụl ọzọ”N’ihi na:
"ọ nwere ike belata ọsọ ọsọ nke nsonaazụ ndị a gosipụtara ma belata oge ibu"
bụ ihe ndabere na ihe atụ nke njikarịcha oge nke na-egbochi njigide, ọ bụkwa ihe ihere ịhụ ndị nwere ọtụtụ ndị na-ege ntị na-atụ aro ihe ndị a n'ihi na ọ na-agbasa akụkọ na-abụghị eziokwu.
SQL sonyere gị na-ekwu maka, na-eche na ị nwere ezi uche dị na ya ga-eme ka oge nzaghachi gị kachasị microseconds. Ga-enwerịrị ọtụtụ tọn na okporo ụzọ tupu onye ọ bụla achọpụta ọkwa ọbụlagodi ọkara ọkara. Ugbu a ee, ọ bụrụ na ị manye onwe gị, ị nwere ike ide ederede SQL nke ga - eme nke ọma, mana mgbakwunye na ntinye data abụghị ihe atụ nke ahụ.
Ọzọkwa, kama ịkwado ịkwado ngwa mgbakwunye mmadụ bipụtara, ọ ga-amasị m ịhụ gị ka ị na-akwado ịkwalite ya wee rụọ ọrụ iji bulie nkwalite gị na ngwa mgbakwunye ahụ n'onwe ya. Dị ka ọ dị, ị nwere ike ịnweta ụfọdụ coders amateur iji tinye mgbanwe gị wee mechaa kwalite ụdị nke ngwa mgbakwunye ahụ ma ha tọghee mgbanwe ahụ mana ha enweghị ike ịchọpụta ihe mejọrọ. Mgbanwe gị adịghị mma, naanị enweghị ọrụ, mana ụfọdụ hacks nwere ike ime ka saịtị kwụsị ma ọ bụrụ na ejiri nyocha n'ọdịnihu nke isi ngwa mgbakwunye karịa nke hacked.
JMTCW. Nọgide na-arụ ọrụ ọma ma ọ bụghị. 🙂
Daalụ maka ịzaghachi - ejighị m n'aka na m kwenyere, n'agbanyeghị. Emechabeghị m ngwa ngwa bulie… n'eziokwu, achọtara m ụzọ kachasị mma iji nweta arụmọrụ niile m chọrọ na-enweghị mkpa ịme mgbanwe ndị ọzọ. N'akwụkwọ m, nke ahụ kwesịrị ịbụ ndị mmepe ọ bụla.
M kwuru na ya nwere ike emetụta arụmọrụ. Achọghị m ịnwale ule ma ọ bụ ịnwale n'ihi na ọ dịghị mkpa ka enyere m ụzọ kachasị ngwa mgbakwunye m. Ọzọkwa - Enwetara m 100% nke arụmọrụ m chọrọ n'emeghị njikọ ma ọ bụ tinye ntinye, wdg, nke ahụ bụ azịza ziri ezi na akwụkwọ m.
Ekwenyere m na gị na ederede ndị ọzọ, n'agbanyeghị. Enwere m nsogbu nke iwegharị plugins, ọ dị m ka m na-ekpughere ọrụ onye ọzọ. Edere m blog nke onye edemede na nke a - yabụ ọ nwere ike buru ihe ndị a dị ka atụmatụ maka ntọhapụ n'ọdịnihu.
PS: Doziri edozi! 🙂
Jenụwarị 5, 2008 na 12:24 PM
@Douglas: Amaghị m na m kwenyere, n'agbanyeghị. Emeghị m nká na-ebuli? Ọzọkwa - Enwetara m 100% nke arụmọrụ m chọrọ na-enweghị isonye ma ọ bụ tinye mgbakwunye, wdg.
Echere m na nke ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti onye na-elele mmemme site na ọrụ zuru oke na nka vs. onye bụ onye practioner na-anwa ime ihe (na anaghị m ekwu na ọ na-eme ọfụma; na ụfọdụ ndepụta edetu m na-egwu ọrụ leta megide nke mbụ
O yiri ka otu onye na-akwụ ụgwọ ego ma ọ bụ onye ọka iwu si agwa onye nwe ụlọ ahịaAgaghị m eme nke ahụ”Na onye nwe ụlọ ọrụ ahụ, n’achọghị ịda mba niile ndị ọkachamara maara banyere ịbụ ndị nwere ike * leghaara ndụmọdụ ha anya n’ihi na ọ dị ka ọ karịrị akarị, ma na-akọ ubi. Chineke maara na m na na na azụmahịa nwe n'oge gara aga na-ịkọ ubi n'ihu niile ndụmọdụ, ezie na ọtụtụ ihe m chargin mgbe e mesịrị. 🙂
@Douglas: M na-achọgharịgharị nke plugins,…
Mba, nke ahụ abụghị kpọmkwem ihe m na-ekwu. Ihe m na-ekwu bụ na ebe ọ bụ ihe mepere emepe ị nwere ike inye aka gbanwee mgbanwe gị na onye edemede mbụ ọ ga-anabata ya, ị nwere ike ime ya n'ike n'ike site na ịkpọtụrụ na inye onyinye. M na-arụ ọrụ ugbu a dịka onye ndụmọdụ ịzụ ahịa na onye na-ahụ maka weebụsaịtị maka ndị na-ebipụta niche na ojiji Drupal maka teknụzụ weebụ, na obodo Drupal na-akpọtụrụ ndị edemede ngwa ngwa (Drupal kpọrọ ha "modulu") ma na-enye aka iji nyere aka melite modulu ndị ọzọ.
PS Daalụ maka ndozi edozi.
Jenụwarị 5, 2008 na 1:37 PM
Ezigbo ihe, Mike!
Enwere m ike tinker na ngwa mgbakwunye ka ị gbakwunye nhọrọ ahụ “Naanị gosipụta Posts Tupu Post Egosiputa”. Echere m na nhọrọ nke abụọ dị ntakịrị karịa maka blọgụ m, mana m ga-elele ma hụ ya nwere ike ịmasị onye ode akwụkwọ.
Jenụwarị 5, 2008 na 6:10 PM
@Douglas: Echere m na nhọrọ nke abụọ bụ ntakịrị ihe ọzọ maka blọọgụ m…
Ee, ekwenyere m. Ezi ihe n'agbanyeghị!
Crud na usoro ikwu tupu okwu! Ọ bụrụ na m kwuru ikwu okwu! '-)
Aha ya bụ Scott Hebert
Jenụwarị 31, 2008 na 2:43 PM
Doug - Enwere m ike ịfu ihe ebe a. O yiri ka
anaghị egbochi posts mere mgbe post ahụ gasịrị ka etinye ya, ka ọ na - egbochi nsonye nke posts nke ị nwere ike ịbụ bipụtara n'ọdịnihu.
Olile anya nke nwere uche na ekele maka nnukwu blog.
Jenụwarị 31, 2008 na 3:56 PM
Nke ahụ bụ nnukwu nchọta! na m ji n'aka na onye ọ bụla (onye na-ede ihe n'ọdịnihu) ga-enwe ekele.
Aga m emelite ajụjụ a na post.
Feb 2, 2008 na 8:40 PM
@Mike: Echere m na nke ahụ bụ ihe dị iche n'etiti onye na - ele ihe omume mmemme site na ọrụ zuru oke yana nka na onye na - agbasi mbọ ike ime ihe
Ọdịiche na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ezie na ọ ga-adị mma ịnweta ihe niile na-agba ọsọ kachasị mma ọ nwere ike ịbụ, n'ọtụtụ ọnọdụ nke na-eyi ihe na-agaghị ekwe omume. M na-agbasi mbọ ike ịchọta nguzozi na mmemme m n’etiti otu m ga-achọ ihe ga-agba ọsọ na ego ole ma ọ bụ oge ọ ga-ewe iji nweta ya.
Ana m agbasi mbọ ike ime ihe kachasị mkpa iji mezuo nzube m na-agbalị ime. Iwepụtakwu oge agaghị efu nnukwu ego.
Na nkenke, ọ gwụla ma enwere ike ịnwe ọnwụ na arụmọrụ m na blọgụ m, agaghị m etinye oge ahụ, ọ bụrụ na ọ ga-achọpụta karịa ka m ga-ekpebi ma oge ọzọ ọ ga-aba uru. Izu oke ezughi oke mgbe niile.
Feb 3, 2008 na 4:04 PM
@Dwayne: Ana m agbasi mbọ ike ime ihe kacha mkpa iji mezuo ihe m chọrọ ime. Iwepụtakwu oge agaghị efu nnukwu ego.
O doro anya na ọ bụrụ na ị na-eme opekata mpe pụtara na ịmụtaghị usoro ka mma iji mee ka ị megharịa opekempe ọtụtụ oge n'ọdịnihu kama ikwe ka ị zere ya, mgbe ahụ ịmela ụgha. Eeh, ọtụtụ ọrụ anaghị achọ mbọ ọzọ mana ahụla m ọtụtụ ndị na - eme ụzọ dị mkpirikpi n'ụzọ dị otu a n'oge gara aga ma ha bụ ụfọdụ n'ime ndị na - adịghị arụpụta ihe na / ma ọ bụ na - enweghị uru m maara (ụfọdụ n'ime ha dị nwute na ndị ọrụ m , ya mere m ji hụ n'ezie na ha enweghị arụpụtaghị ihe.)
@Dwayne: Na nkenke, belụsọ na ọghọm arụmọrụ ahụ pụtara na blọọgụ m, agaghị m etinye oge ahụ, ọ bụrụ na ọ mara m karịa ka m ga - esi kpebie ma oge ọzọ ọ ga - aba uru. Izu oke ezughi oke mgbe niile.
Echere m na ị gbaghara isi ihe m. Nke mbu, m na ekwu na Doug na - achoputa ihe oma, obughi mu, kama karia ma oburu na igha eme ihe omuma nke gha eme ka nsogbu gi ghara idi nma karia, ekwusila ya maka ojiji ndi ozo ma o buru na igaghi agwa ha ụdị ụdị nsogbu ọ ga - ewetara ha ma emechaa.
Ihe nzuzu nke okwu gị bụ na ịme ụzọ dị mfe ma dị mfe na-agwụ gị ọtụtụ oge karịa n'ọdịnihu mgbe ị wụnye nchedo nchekwa maka WordPress gị, hapụ ọrụ gị hacked ma chọọ ka ọ laghachi. Ugbu a ị nwere haystack na agịga na-efu efu ma ugbu a, ị ga-achọpụta ebe agịga ahụ dị.
Wepụta oge iji rụọ ọrụ? Bah, n'ozuzu ya achọghị. Wepụta oge maka mmezi? Ee, ọ na-akwụ ụgwọ onwe ya ogologo oge.
Ichie, ee, ọ bụ ọdịdị mmadụ ịhapụ ịdọ aka na ntị maka ihe ndị na-emebutụbeghị onwe ụfụ. Nwee obi ụfụ otu mgbe, ọ ga - abụ na ị ga - enwe ike ị toa ntị na ịdọ aka na ntị ndị ahụ sitere n'aka ndị nweburu ahụ mgbu.
Feb 3, 2008 na 8:03 PM
Otu ihe m ga-ekwu; Echere m na mbanye anataghị ikike Doug ga-abụ ezigbo mgbakwunye na WordPress, ọbụlagodi dị ka nhọrọ onye ọrụ. O yiri ihe nzuzu na-ejedebe naanị ihe ndị metụtara ya.
Nakwa, m ga-arịọ Doug ka o biputere banyere otu esi edepu ozi ya kwa ụbọchị site na del.icio.us; nke ahu gabu isi okwu.
Feb 3, 2008 na 8:09 PM
Ekwenyere m na gị… na nke a bụ otu esi eme kwa ụbọchị site na Del.icio.us. Kporie!
Feb 3, 2008 na 8:22 PM
Heh. Ezigbo! Echere m na m gaara ebu ụzọ gọọ ya maka ya.
BTW, ezitere m gị ozi email gbasara m nọ na Indy Feb 16-19 ihe dịka izu gara aga mana anụbeghị azụ. Get nwetara? (nweere onwe ihichapụ akụkụ a nke nkọwa m.)
Akwa post, M ga-eme tweak na ngwa mgbakwunye m na-ekele gị ọzọ!